Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Seychelles Madagascar Malgache » Sambatra ny fipetrahana any Seychelles: tsiron'ny paradisa!
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao Mafana Alemana • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao • Seychelles Madagascar Malgache • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Ny mpivady tsara vintana ao amin'ny Paradise Seychelles
Rehefa niainga tamin'ny Qatar Airways i Tim sy Marlien Gentges tamin'ny sidina 12 ora avy tany Alemana, dia tsy fantatr'izy ireo akory fa hipetraka any Seychelles izy ireo ny alatsinainy 11 oktobra ho mpitsidika 114,859 tsara vintana, manamarika ny dingana lehibe iray hahatongavana any amin'ny Nosy Indian Ocean ary nankalazaina noho ny isan'ny mpitsidika tamin'ity taona ity nihoatra ny tamin'ny taona 2020.
Ireo mpivady dia nanana fanomanana be dia be talohan'ny dia noho ny COVID-19 ary niahiahy izy ireo rehefa najanona tamin'ny fipetrahana tao Seychelles.
Avy eo dia fantatr'izy ireo fa nankalazaina ho nanamarika ny dingana lehibe ho an'ny toerana haleha izy ireo.
Ho an'ny andro voalohany tao Mahé, ny Departemantan'ny Fizahantany dia nampiantrano azy mivady hanao fitsangantsanganana tamin'ny sambo catamaran Anahita an'ny Mason's Travel izay nankafizin'izy ireo andro nahafinaritra.
Ireo tia fitsangatsanganana eo amin'ny faha-30 taonany, Tim, mpilalao handball matihanina sady polisy, ary Marlien, mpampianatra sekoly ambaratonga faharoa, dia mipetraka ao amin'ny toeram-pambolena kely iray any Dusseldorf any Alemaina miaraka amin'ny biby fiompiny ary mankafy ny fiaraha-mandeha.
Tia mandehandeha i Marlien, fa i Tim kosa tsy dia liana tamin'ny voalohany toy ny asany sy ny ekipa fanatanjahan-tena izay tsy nanam-potoana firy hivoahana lavitra ny trano. Na izany aza, taorian'ny diany voalohany niarahan'izy ireo tany Canada, dia raiki-pitia tamin'ny fitsangatsanganana niaraka tamin'ny vadiny izy. Niaraka na irery izy mivady dia nitsidika firenena maro eran'izao tontolo izao toa an'i Kroasia, France, Italia, Netherlands, Austria, Sweden, Ireland, Spain, Fiji, ary Sri Lanka. Seychelles no nosy voalohany niarahan'izy mivady.
Marlien sy Tim, izay nihaona tamin'ny lalao handball fony izy ireo mbola zatovo, dia nanambady tany Alemana tamin'ny 6 Jona 2020, ary nanazava ny fomba nifidianan'izy ireo ilay toerana haleha. Rehefa niara-dia tany amin'ny kontinanta rehetra afa-tsy Afrika, dia naniry hanao tantely afa-drakotra tany amin'ny firenena iray any Afrika izy mivady; tamin'izay no nahitan'izy ireo sy nifidianany Seychelles. Nikasa ny ho tonga izy ireo amin'ny taona 2020 aorian'ny mariazin'izy ireo saingy noho ny famerana ny fitsangatsanganana COVID-19 dia voatery najanona ny drafitry ny dia.
"Nikasa ny ho any Seychelles izahay taorian'ny mariazinay fa noho ny COVID dia tsy tanteraka izany, ka nikasa ny 2021 na 2022 izahay," hoy i Marlien nanambara fa rehefa nanomana ny volan-tantely izy ireo dia te ho any Seychelles, ary Tsy dia natoky tena loatra i Tim, fa tamin'ny fahatongavan'izy ireo dia samy nandritry ny volana izy ireo fa io no safidy mety.
"Faly be izahay fa tonga rehefa tonga satria nahatonga anay ho mpivady nanam-bintana hanamarika dingana lehibe any Seychelles," hoy i Marlien.
Betsaka ny fanomanana nataon'izy ireo alohan'ny dia lavitra noho ny COVID-19 ary niahiahy izy ireo rehefa nijanona teo amin'ny fipetrahana tany Seychelles, vao hitany fa nalaina ho mariky ny zava-dehibe ho an'ny toerana haleha izy ireo.
“Tsy nino izahay fa izahay no isa tsara vintana, adala izany. Tena nandray tsara ary tena sariaka. Nilaza ny rehetra taminay fa olona any Seychelles dia sariaka be ary manaiky izahay, ”hoy i Marlien sy Tim faly.
Nilaza izy mivady izay tany Seychelles nandritra ny 8 andro fa mikasa ny hiaina ireo nosy betsaka araka izay azo atao ary hankafy sakafo kreôla.
Ho an'ny andro voalohany tao Mahé, ny Departemantan'ny Fizahantany dia nampiantrano azy mivady hanao fitsangantsanganana tamin'ny sambo catamaran Anahita an'ny Mason's Travel izay nankafizin'izy ireo andro nahafinaritra nitsidihany ny zava-mahagaga any Seychelles ny ranon'ny Ste. Anne Marine Park.
Tamin'ny alalan'ny fitaratra mangarahara amin'ny sambo iray semi-submersible, dia nanaram-po tamin'ny trondro tropikaly be dia be izy ireo, zavaboary monina ao amin'ny zaridainan'ny haran-dranomasina maro loko. Narahin’ny filomanosana tao anaty rano mafana misy turquoise izany, namahana ireo trondro nanakaiky teo amin’izy ireo nanao snorkeling tao amin’ny valan-javaboary an-dranomasina.
Tim sy Marlien dia nankafy manokana ny fisakafoanana an-tsokosoko sy ny fialamboly mozikan'ny ekipa Mason's Travel alohan'ny hidirany an-tanety hijerena ny Nosy Moyenne sy ny zavamaniry sy ny biby ao aminy. Faly be i Marlien nahita sy nifanena tamin’ireo sokatra goavam-be izay nivezivezy malalaka teny an-toerana sy ilay zazakely tao amin’ny akanin-jaza. “Afaka mifankahita amin'ny sokatra goavam-be aho amin'ny lisitry ny fialan-tsasatra; Tena faly aho”, hoy izy.
Ny mpivady dia nanararaotra ny fotoana fijanonany, kayak ary snorkeling, ary koa nilomano tao amin'ny dobo rock malaza ao amin'ny Bliss Hotel Glacis ary nitsidika ny Nosy La Digue izay nanantenan'izy ireo ny bisikileta manerana ny nosy.
Nilaza i Marlien sy Tim fa ny fiverenana dia ao anaty karatra, ary te hiverina any Seychelles izy ireo, miaraka amin'ny namana na fianakaviana.
Ny soritr'aretin'ny COVID-19 lavitra ho an'ny olona voan'ny rheumatic...